Marwada Madaxweynaha Soomaaliya oo dhagax dhigtay dhismaha Isbitaalka Hobyo - Jowhar Somali news Leader
Home News Marwada Madaxweynaha Soomaaliya oo dhagax dhigtay dhismaha Isbitaalka Hobyo
Marwada Madaxweynaha Soomaaliya oo dhagax dhigtay dhismaha Isbitaalka Hobyo
Marwada Madaxweynaha Dalka Saynab Cabdi Macalin iyo Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa maanta dhagax-dhigay isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee Degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
Dhagax-dhiga waxaa ku wehlinayay guddoomiyaha golaha wakiilada Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ,Guddoomiyaha gobolka mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal iyo masuuliyiin ka socday hay’adda Qatar Charity ee Soomaaliya.
Marwada Madaxweynaha Dalka Saynab Cabdi Macalin ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsanatahay in xafiiskii ugu horeeyay ee noocaan ay ka hirgaliso degmada Hobyo waxaana sidoo kale ay sheegtay in xaruntaa loo dhisay dhammaan deegaanada hoosyimaado.
“Waxaan idin kula dar daarmayaa inaad ilaashataan xarunta muhiimka u ah Haweenka Soomaaliyeed sidoo kale Sharaf ayay ii tahay inaan wax uqabto dadkeyga iyo dalkeyga ,hase ahaate waxaa igu dhaliyay in xaruntaa dhiso fariin iiga timid haweenka deegaanka ayay ku dartay hadalkeeda marwo Seynab Cabdi Macalin Marwada madaxweynaha dalka.
Sidoo kale Marwada madaxweynaha Dalka Seynab Cabdi Macalin waxaa ay sheegtay in mashruucaan dhismaha xarunta hooyada iyo dhalaanka qarashka ku baxaya ay ka kaashaneyso Hay’adda Qatar Charity sidoo kale dhulkane uu bixiyay muwaadin Soomaaliyeed Abshir Diine Cawaale
Ugu dambeyn marwada madaxweynaha dalka waxa ay u mahadcelisay dhammaan bulshada iyo masuuliyiinka kala duwan ee soo dhaweynta diiran u sameeyay.
Marwada Madaxweynaha oo dhagax dhigtey isbitaalka Hobyo